【I-SYRI Boutique Guesthouse】 6 Women Cabin - 5 Lower - I-Airbnb
【I-SYRI Boutique Guesthouse】 6 Women Cabin - 5 Lower
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguAdam
UAdam unezimvo eziyi-82 zezinye iindawo.
(Ixabiso yibhedi enye ngosuku umntu ngamnye)
Ihotele ikwisixeko esisembindini weVientiane, kufutshane kakhulu neNkundla yeSizwe kunye neMyuziyam; ikude ngeemitha eziyi-500 ukusuka kuMlambo iMekong kunye nemarike yasebusuku; yimizuzu eyi-10 kuphela yokuya kwisikhululo seenqwelo-moya i-International Airport.
Ulwamkelo lunokubonelela ngenkonzo yobuqu yeeyure ezingama-24 kuwe, iWiFi yasimahla enesantya esiphezulu egubungela zonke iindawo; I-Pantry ibonelela ngeti yasimahla, i-ice cube, i-snacks; Indawo kawonke-wonke etyebileyo ukuze uyifunde, ungene kwi-Intanethi, uncokole, udlale iibhiliyadi, njl.njl. Ikomityi yeti, iglasi yewayini, inokuba libali lakho lokuhamba!
Sinegumbi eline-cinema yangasese, ibhedi ye-tatami, i-retro, isitayela esilula kuphela ukukubonelela ngezinto ezimangalisayo; Ibhedi ethambileyo, isofa etofotofo, ukuze uphelise ukudinwa kohambo!
Ikhabhathi yokulala enesitayile esisodwa, icocekile kwaye ikhululekile!
Indlu nganye yokulala ixhotyiswe ngezitshixo, iilokha, iihanger, iihuku zeempahla, izibane zokufunda kunye nesokethi ngokubanzi. Igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo lixhotyiswe ngezixhobo zokuhlambela zasimahla kunye nezomisi zeenwele. Inezixhobo ezipheleleyo kwaye ikulungele ukuhamba kwakho okulungileyo.
Iindidi ezine ezohlukeneyo zesidlo sakusasa esithambileyo esimnandi onokuthi ukhethe. Kwindlu yeeNdwendwe, sineRestaurant, iCafé, kunye neeBar, ezinokubonelela ikofu yeLao Specialty, iziselo ezibandayo, kunye nokutya okudityanisiweyo kukuzisela amava awodwa.
Abameli beSYRI '(Border collie) sele eza kwenza iholide yakho ibe ntle
Ulwamkelo lunokubonelela ngenkon…
4.71 (iingxelo zokuhlola 7)
Iilwimi: 中文 (简体), English, ภาษาไทย
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vientiane